ေဆာင္းပါး – Page2– Voice of Myanmar
သေလာပဗ္ဗတ သံခမောက်တောင်တော် စစ်ကိုင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၄-၂၀၂၀ ရှိုင်းအောင် ( VOM ) စစ်ကိုင်းတိုင်း ၊ ကသာခရိုင်၊ ကောလင်းမြို့မှ အနောက်ဘက် ၄ မိုင် ခန့်သာကွာဝေးပြီး သစ်ပင်၊ ဝါးပင် များ သိပ်သည်းထူထပ်စွာဖြင့် မြူခိုးများ ဝေသီရစ်မှိုင်းလျှက် သံခမောက်တောင်တော်ကြီးကို ရေးရေးပြပြမြင်နိုင်ပါတယ်။ ခမောက်တောင်တော်မှာ အခြေကနေစပြီး တောင်ထိပ်တိုင်အောင် အမြင့် ( ၆၀၃ )ပေရှိပြီး ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်အထက် ( ၁၂၂၁ )ပေရှိကာ ခန့်ညားထယ်ဝါမတ်စောက်စွာ ခမောက်တစ်လုံးရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန် တည်ရှိတဲ့အတွက် မျက်မှောက်ခေတ်မှာ ခမောက်တောင်လို့ ခေါ်တွင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်တော်အနီးနားမှာ ဂွေးချို တောင်ရွာ၊ မြောက်ရွာ၊ လွှဲမောက်ရွာ၊ ပန်းတင်ရွာ၊ သက္ကယ်ကျင်းရွာ၊ နတ်ရေတွင်းရွာ၊ ရေကန်သာရွာ နဲ့ သဖန်းကုန်ရွာ စသဖြင့် ရွာပေါင်းမြောက်များစွာ ခြံရံပြီး လုံကွဲတောင်၊ ဒုတ္တာတောင်၊…
သတင္း, ေဆာင္းပါးLeaveacomment
တရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖျင် မြန်မာက ဘာတွေယူသွားပြီး ဘာတွေပြန်ပေးခဲ့လဲ
January 20, 2020 Editor Htein Lin
တရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖျင် မြန်မာက ဘာတွေယူသွားပြီး ဘာတွေပြန်ပေးခဲ့လဲ အောင်ထူးနိုင်(VOM) မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့မှ ၁၈ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံတော်အဆင့် ချစ်ကြည်ရေးခရီးလာရောက်ခဲ့တဲ့ တရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖျင်ရဲ့ ခရီးစဉ်ကတော့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ ခရီးစဉ်အတွင်း သမ္မတရှီဟာ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ ပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ တွေ့ဆုံရာမှာ နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေက မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံမှု ခိုင်မာစေရေးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား တည်ရှိတဲ့ ဘက်စုံမဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကို အေးအတူပူအမျှအဖြစ် တိုးမြှင့်သွားနိုင်ရေး၊ မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံရေးနှစ် (၇၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ပူးတွဲကျင်းပသွားရေးနဲ့ နှစ်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပြည်သူတွေအကြား ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု ပိုမိုတိုးမြှင့်သွားရေး ကိစ္စရပ်တွေနဲ့စပ်လျဉ်းလို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ မြန်မာအစိုးရဘက်က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေက သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ သာယာဝပြောရေးနဲ့ ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရာမှာ အောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေ…
သံုုးသပ္ခ်က္, ေဆာင္းပါးLeaveacomment
January 15, 2020 January 15, 2020 Editor Htein Lin
စစ်ကိုင်း ကျောက်တာမှာ ကျောက်ပြင်ထုတ်တဲ့ ကုန်ကြမ်းကျောက်ရှားပါးလာ စစ်ကိုင်း ဇန်နဝါရီ ၁၅-၂၀၂၀ မောင်တာရာ (VOM) စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ကျောက်တာရွာက ကျောက်ပျဉ်ထုတ်လုပ်ရောင်း ချနေသူတွေဟာ ယခင်က အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင် မင်းဝံတောင်ရိုးကနေထွက်တဲ့ ကုန်ကြမ်းသဲကျောက်တွေနဲ့ ထုတ်လုပ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာကနေ ကုန်ကြမ်းသဲကျောက်တွေ မရရှိနိုင်တော့တဲ့အတွက် ကောလင်းမြို့နယ်ကနေ အဓိကထားမှာယူ လုပ်ကိုင်နေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မိုးတွင်းကာလမှာတော့ ကုန်ကြမ်းထုတ်တဲ့တွင်းတွေထဲ ရေတွေဝင်ရောက်ပြီး တွင်းတွေ ပိတ်မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့ အတွက် ကုန်ကြမ်းဝယ်ယူရရှိမှု အခက်အခဲတွေ ရှိတာကြောင့် မိုးတွင်းကာလမှာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချရာမှာတော့ တွင်ကျယ်မှု မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ကျောက်တာရွာက ထွက်တဲ့ ကျောက်ပျဉ်တွေကို ရန်ကုန် ၊ ပြည် ၊မကွေး၊ စတဲ့ မြို့နယ်တွေကို တင်ပို့ရောင်းချကြပါတယ်။ တင်ပို့ရောင်းချရာမှာ (၁၂) လက်မ ကျောက်ပျဉ်တစ်ချပ်ကို ငွေကျပ် (၁၄၀၀)ကျပ် ( ၉) လက်မ ကျောက်ပျဉ်တချပ်ကို ငွေကျပ်…
စီးပြားေရး, ဓာတ္ပုံ၊ ဗီဒီယုိ, သတင္း, ေဆာင္းပါး, ျမန္မာသတင္းLeaveacomment
January 11, 2020 Editor Htein Lin
သံုုးသပ္ခ်က္, ေဆာင္းပါး, ျမန္မာသတင္းLeaveacomment
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနအနေနဲ့ (၄) နှစ်အတွင်း ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ ?
December 20, 2019 Editor Htein Lin
Unicode ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနအနေနဲ့ (၄) နှစ်အတွင်း ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ ? အန်အယ်လ်ဒီအစိုးရတက်ပြီး ၄နှစ်တာအတွင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကို ပြည်သူတွေသိရှိအောင်တင်ပြပေးတာဖြစ်ပြီး မိမိတို့နေထိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာ ဘာတွေအရေးပေါ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေသလဲဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပြနိုင်ဖို့ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့သမျှနဲ့ ဆောင်ရွက်နေဆဲ လုပ်ငန်းတွေကို တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ အဆောက်အဦ ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများကို တင်ပြရလျှင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများ အတွက် Assemble Board အလုံး (၉၀) ကို တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ Assemble Board House (၄၃) လုံး ကို ကျေးရွာ (၄) ရွာမှာ တည်ဆောက်လျက်ရှိပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ အပ်နှံသော တရားလွှတ်တော်များ၊ ဆေးရုံကြီးများ၊ တက္ကသိုလ် ကောလိပ်များ(၃၈၄) ခု တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ (၃၁၉) ခုအား တည်ဆောက်လျက်ရှိပါတယ်။ အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း…
သတင္း, ေဆာင္းပါး, ျမန္မာသတင္းLeaveacomment
ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရာသီတုပ်ကွေး
သူရဟိန်း ရာသီတုပ်ကွေးဆိုတာ လူတစ်ဦးကနေ တစ်ဦးဆီကို လွယ်ကူစွာကူးစက်နိုင်တဲ့ ပြင်းထန်သောဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှှု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ထင်ထားတာထက် ပိုမိုပြင်းထန်ပြီး ကူးစက်ခံရတဲ့သူ အများစုဟာ ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းမှာ ဆေးကုသမှုခံယူရတဲ့အထိ ဖြစ်ပွားနိုင်ကာ တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူတိုင်း အလွယ်တကူ ဖျားနာတတ်ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ရက်နေ့ မှ သြဂုတ်လ ၁၀ရက်နေ့အထိ ပြည်သူများအကြား တုပ်ကွေးကူးစက်မှှုဟာ ၁၃,၀၄၈ ဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူ ၆၈ဦး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးသည် ကူးစက်မှှုအများဆုံးဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကချင် ပြည်နယ် နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ ကူးစက်မှုခံရမှုဒုတိယအများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ WHO ရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရ ဗိုင်းရပ်စ်သည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရ မည်သည့် အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားမဆို ကူးစက်နိုင်ပြီး နားမကျန်း ဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင် သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။…
ေဆာင္းပါးLeaveacomment
ပတ္တမြားမြေမှ လုပ်ကွက် မျှော်လင့်ကြသူများ
အောင်ထူးနိုင်(VOM) နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်နေ့မှာ မိုးကုတ်မြို့ကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ခရီးစဉ် အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ မိုးကုတ်မြို့မှာရှိတဲ့ ညောင်သုံးပင် ပရိယတ္တိသာမဏေကျော် စာသင်တိုက်အတွင်း တည်ဆောက်ပြီးစီးသွားတဲ့ ညောင်သုံးပင် ပရိယတ္တိသာမဏေကျော် သာသနာ့ဗိမာန်တော်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်ဖို့ ဖြစ်တယ်။ မိုးကုတ်ကို ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ သူ့အတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတယ်။ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေထဲမှာ မိုးကုတ်ဒေသခံဖြစ်တဲ့ ဦးစိုးဌေး၊ ကိုဇော်ဝင်း၊ ကိုကျော်တင်၊ကိုမျိုးထက်ဇော်၊ ကိုဇော်မျိုးအပါအဝင် ၆ ဦးဖြစ်တယ်လို့ သိရတယ်။ ကျောက်မျက်လုပ်ကွက်ချထားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ တရားမျှတဖို့အတွက် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသိပေးတာလို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေက ပြောပါတယ်။ လက်လုပ်လက်စားတွေအတွက် ချထားပေးမယ့်နေရာတွေက ကျောက်မထွက်တဲ့နေရာဖြစ်မှာကို ဒေသခံတွေက စိုးရိမ်နေကြတယ်။ “ကျွန်မတို့ဒေသခံအနေနဲ့ ကျောက်ထွက်တဲ့နေရာမှာ ရချင်တာပေါ့”လို့ မိုးကုတ်ဒေသခံဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မေက ပြောတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လယ်ပိုင်းက သယံဇာတနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ ဦးစီးပြီး မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေကို ရေးဆွဲခဲ့တယ်။ ဒီဥပဒေကို အခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၃၀…
အောင်ထူးနိုင်(VOM) လက်ရှိကာလမှာ သတင်းမီဒီယာတွေ ဘယ်လို ရပ်တည်နေကြရသလဲဆိုတာကို အရင်ဆုံးဆွေးနွေးလိုတယ်။ အစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ ပုဂ္ဂလိကသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ ကွာခြားချက်ကို ဆွေးနွေးကြစို့။ အစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေဟာ သတင်းယူဖို့အတွက် အခက်အခဲမရှိဘူး။ သွားလာရေးအတွက် ဖယ်ရီကားစီစဉ်ပေးတာ၊ သီးသန့် တက္ကစီကားတွေ စီစဉ်ပေးတာ၊ ဒါ့အပြင် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေနဲ့ လုပ်ကိုင်နေရတာဖြစ်တော့ အရှုံးပေါ်မှာလည်း စိတ်ပူစရာမလိုဘူး။ ပြောချင်တာက သူတို့အတွက် သတင်းယူရတာ အစစအရာရာ အဆင်ပြေတယ်။ ပုဂ္ဂလိက သတင်းမီဒီယာတွေကတော့ သူတို့နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါ။ အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိတယ်။ သွားလာရေးအတွက်ဆိုရင် လိုင်းကားလောက်ပဲ စီးနိုင်တာယ်။ သတင်းယူပြီဆိုရင်လည်း ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဌာနဆိုင်ရာနဲ့ ဝင်တာထွက်တာ၊ သတင်းယူတာတွေမှာဆိုရင် အဆိုးဆုံးပဲ။ အစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေက ဌာနဆိုင်ရာက ပေးတဲ့အချက်အလက်ကိုသာ သတင်းရေးကြတယ်။ ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေကျတော့ ဌာနဆိုင်ရာက ပေးလိုက်တဲ့ အချက်အလက်တွေက မှန်ရဲ့လား၊ သူတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေက မှန်ရဲ့လား၊ ဘယ်နေရာမှာ ထိန်ချန်ထားတာလဲဆိုတာကို အမြန်တမ်းစမ်းစစ်နေလေ့ရှိတယ်။ ဒါဟာ အစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့…
အညာဒေသ ကောက်သစ်စားပွဲခေါ်တဲ့ မုန့်ပေါင်းပွဲတော်ကျင်းပ
December 11, 2019 December 11, 2019 Editor Htein Lin
အညာဒေသ ကောက်သစ်စားပွဲခေါ်တဲ့ မုန့်ပေါင်းပွဲတော်ကျင်းပ စစ်ကိုင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၁-၂၀၁၉ စောပြည့်ချမ်းသာ(VOM) စစ်ကိုင်းမြို့မှာ အညာဒေသကောက်သစ်စားပွဲလို့ခေါ်နဲ့မုန့်ပေါင်းပွဲတော်ကို စစ်ကိုင်းမြို့ ဒါးဝယ်ဈေးတိုက်နယ်ထဲက ငါးထပ်ကြီးဘုရား အနီးမှာ ဒီနေ့ညနေပိုင်းအချိန်က စတင်ကျင်းပနေပါတယ်။ အဲ့ဒီမုန့်ပေါင်းပွဲတော်ကို ရှေးအရင်က ကျင်းပပြုလုပ်လာတာဖြစ်ပြီး မုန့်ပေါင်းပွဲတော် တပေါင်းလပြည့်နေ့နဲ့လပြည့်ကျော်၁ရက်ဆိုပြီး ၂ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပတာဖြစ်ပြီး ပွဲတော်နေ့မှာစားတဲ့မုန့်ပေါင်းပွဲဟာ ဆေးဖက်ဝင်တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ ရှေးတုန်းကလမုန့်ပေါင်းပွဲကို နတ်တော်လပြည့်နေ့ ည တစ်ည ထဲကျင်းပတာဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့၁၀နှစ်လောက်က စပြီး လပြည့်ကျော်၁ရက်နေ့ ညထိကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကမုန့်ပေါင်းကို မြေပေါင်းအိုးနဲ့ လုပ်ကိုင်ရောင်းချကြပြီး အခုမှာတော့ သံဖြူ ပုံးပေါင်းအိုးနဲ့ ရောင်းချလာကြပါတယ်။ မုန့်ပေါင်းပွဲတော်ကိုသမိုင်းဝင် ဝေဠုဝန်ငါးထပ်ကြီးဘုရား အနီး၊ ဒါးဝယ်ဈေးတိုက်နယ်ထဲက တောင်ဘော်ဂါ၊ ကနားတော်၊ ညောင်ကုန်း စတဲ့အနီး ရပ်ကွက်တွေက လာရောက်ရောင်းချကြပြီး မုန့်ပေါင်း ဈေးသည် ၇၀ လောက်လာရောက် ရောင်းချကြပါတယ်။ #voiceofmyanmar #စစ်ကိုင်း #မုန့်ပေါင်းပွဲတော်…
ဓာတ္ပုံ၊ ဗီဒီယုိ, ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ, ေဆာင္းပါးLeaveacomment
Unicode ကျောက်မျက်အခွန် လျော့ပေးသင့် မန္တလေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ၊ ၂၀၁၉ အောင်ထူးနိုင်(VOM) Video News မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာအခွန်နှုန်းဟာ များပြားလွန်းတာကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်တွေ အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေဆီက သိရပါတယ်။ ကျောက်မျက်ရတနာအခွန်ဟာ အဆင့်ဆင့်ပေးဆောင်နေရတာကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်တွေ အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်တာလို့ ပတ္တမြား၊ နဂါး ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့ ဒါရိုက်တာ ဦးထွန်းဝင်းက ဆိုပါတယ်။ “သူတို့က တစ်ခုတည်းကောက်တာဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က ပေးရတာက ခေါင်းစဉ်များနေတယ်။ ဟိုတုန်းကတော့ ကုမ္ပဏီက ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ နိုင်ငံတော် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ အခုတော့ ကုမ္ပဏီ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ နိုင်ငံတော် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဒါပေမဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းက အပြည့်ရတာ မဟုတ်ဘူး။ တွင်းဝခွန်က ဆောင်ရသေးတယ်။ ရောင်းခွန် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဗျာ၊ အဲဒီတော့ ကိုယ့်ဆီမှာ ဘာမှ…